I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-2021 | AASraw
/Blog/Ithala/I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-2021
ezaposwa ngomhla 08 / 31 / 2018 by 阿斯劳 bha liweyo Ithala.
Igama elithi "nootropic" laqanjwa ngo-1972 ngugqirha waseRomania uCorneliu E. Giurgea (1923-1995). I-Giurgea ibibandakanyeka kulungelelwaniso lwento ipiracetam kwi-1964, eyiyo enye yeeNootropic ezaziwa kakhulu. Unyule eli gama ngokufana nesigxina kwigama elithi psychotropic.
Nayiphi na into ye-nootropic ngokweekhrayitheriya zeGiurgea eneneni inokuphucula ukuqonda. Into enefuthe lokuqonda okuqinisekileyo kuphela yi-nootropic ngokwengcaciso yenkcazo ukuba ikwanayo nefuthe le-neuroprotective kwaye ayinayo ityhefu. Izikhuthazi zobuchopho ezinjenge-amphetamine azizizo ii-nootropic agents ngengqondo engqongqo, nangona zinokuzisa ukomelela kwengqondo, njengoko zinokunxulunyaniswa neziphumo eziyityhefu.
Kwiminyaka yakutshanje, intengiso ye-nootropics ikhulile. Izinto ezininzi zinokuvunywa okwethutyana okanye iziphumo zazo azingqiniswanga. Ngamanye amaxesha izifundo zexesha elide kwiziphumo ebezingalindelekanga ziyalahleka. Kukho umahluko ocacileyo phakathi kweziyobisi kunye nezinye izinto. Ngokwenkcazo, nayiphi na into echaphazela ukusebenza kwengqondo kakuhle yiarhente ye-nootropic ukuba inefuthe le-neuroprotective kwaye ayinayo ityhefu. Ngale ndlela, izinto ezinje nge-amphetamine azikho phakathi kwee-nootropics njengoko zinetyhefu.
Into eqhelekileyo ye-nootropics kukuba zonke ziyaxhasa kwaye zonyusa ii-neurotransmitters kwingqondo nakwindlela yazo. “Amandla engqondo” yiadenosine triphosphate (abk. ATP), eyenza iiseli zobuchopho ngokwazo kwiswekile nakwioksijini. Umzekelo, i-piracetam yenza lula kwaye inyusa imveliso ye-ATP phantsi kwemeko yokunqongophala kweoksijini. Ikwonyusa ukuhamba kwegazi liye kwingqondo, ukusetyenziswa kweoksijini kunye neswekile yokucolwa komzimba.
I7 Best Nootropics(IMicrodrug) kwiimarike ze-2021
IArmodafinil sisiyobisi esivela kwiqela le-psychostimulants, elahluke mpela kubume beemolekyuli ezivela kwizikhuthazi ezisekwe kwi-amphetamine. Imele (R) -i-antiantiomer ye-modemin ye-racemate.
1. Unyango lwe-narcolepsy: i-narcolepsy sisifo se-nervous system esisizathu esingaziwa. Iimpawu eziphambili kukuba ayinakuhlala iphaphile okanye ilumkise emini, kwaye kukho iziqendu zokulala ezingalawulekiyo kunye nohambo. Izigulana zihlala zingenako ukwenza izifo ezizenzele zona. Ukulala kwaye awukwazi ukuhlala ngesiqhelo. Njengohlobo olutsha lokuvusa iziyobisi, iModafinil inokwenza ukuba izigulana zisuse ukozela emini kwaye zigcine umsebenzi oqhelekileyo, kodwa akusayi kubakho ziphumo zingalunganga njengokuchaphazeleka okungaqhelekanga. Elona chiza lifanelekileyo lokuphazamiseka kubuthongo. Izifundo zibonise ukuba i-modafinil inokuziphucula ngokufanelekileyo iimpawu kwaye inciphise kakhulu inani lokulala kunye nenani leentsuku emini ngaphandle kokuchaphazela ixesha kunye nomgangatho wokulala ebusuku. I-modafinil yomlomo yayilawulwa kwizigulana ezili-18 ezine-narcolepsy ezizenzekelayo kunye nezigulana ezingama-24 ezine-narcolepsy kwidosi yemihla ngemihla ye-200-500 mg / ngosuku. Iziphumo zabonisa ukuba ukulala kunye nokudinwa kwajongwa kwizigulana ezinesifo sokukrexeza kunye narcolepsy. Ukulala kuncitshiswe kakhulu, ngenqanaba elipheleleyo le-83% kunye ne-71% ngokwahlukeneyo. I-Modafinil inokuthintela i-dyskinesia yengqondo ebangelwa kukungalali kakuhle, ukuphucula ukusebenza kwengqondo, kwaye ayinampembelelo ekuqaleni, ukugcinwa, ukuvuswa kunye nokulala ubuthongo bokulala ebusuku, kwaye akuchaphazeli isimilo sakusasa kunye nesikhohlela sasemini.
I-J147 CAS 1146963-51-0 sisiyobisi esisetyenziswayo kunyango lwe-Alzheimer's kunye nesifo sengqondo esixhalabisayo. Iyeza lokulinga elibizwa ngokuba yiJ147 linokuba sisiyobisi sanamhlanje. Izifundo zibonise ukuba sinokunyanga ngokufanelekileyo isifo se-Alzheimer kunye nokubuyisa ukuguga kweempuku. Izazinzulu zikulungele ukusebenzisa ichiza kuvavanyo lweklinikhi lomntu. Kutshanje, kwingxelo yophando epapashwe kwiphephancwadi i-Aging Cell yamazwe aphesheya, abaphandi beSalk Institute baveze indlela esebenza ngayo iJ147. Bafumanise ukuba i-J147 inokuba yiprotheyini kwi-mitochondria. Idibanisa ukukhuthaza ukwaluphala kweeseli, iimpuku, kunye neziqhamo zeempukane ezibonakala zincinci.
Umphandi uDave Schubert uthe kolu phando sifumene unxibelelwano phakathi kweyeza elilingwayo i-J147 kunye nokuguga komzimba, isifo se-Alzheimer; ukukhangela iithagethi ze-J147 kunokuba kubalulekile kunyango kunyango lokuguga. Kwangoko ngo-2011, savelisa ichiza i-J147, inguqulelo eguqulweyo ye-curry spice turmeric. Ukusukela ekuphuhlisweni kweJ147, abaphandi bafumanise ukuba inokubuyisa umva imemori yomntu kwaye inokukhuthaza iiseli zengqondo ezintsha. Kwangelo xesha, inokucothisa okanye ukubuyisela umva isifo se-Alzheimer emzimbeni wempuku, kodwa abaphandi abakhange bayicacise indlela i-J147 esebenza ngayo kwinqanaba leemolekyuli.
Izifundo ezininzi sele zijongile kwiziphumo ze-huperzine kunyango lwe-Alzheimer's. Ngelishwa, ezi ziphumo zovavanyo azinantsingiselo, kuba kwiimeko ezininzi kuphela linani labathathi-nxaxheba ebelikho, okanye iindlela zovavanyo ezingathandabuzekiyo zisetyenzisiwe.
Kuhlalutyo lwe-meta lwamaphepha aliqela ophando, uphuculo lwabonwa (kwizigulana ze-Alzheimer) kwezi ndawo zilandelayo: izakhono zokuqonda, imeko ngokubanzi, kunye nemisebenzi yemihla ngemihla. Ngelishwa, kukho uphando oluncinci ngokubanzi kwi-pramiracetam, kodwa kule minyaka ili-10 idlulileyo, akukho sifundo sinye esapapashwayo.
Ukhuseleko kunye neempembelelo zecala
Njengazo zonke iiRacetams, inyamezelwa kakuhle ngumzimba womntu; Umngcipheko weziphumo ebezingalindelekanga usezantsi-okoko nje usetyenziswa kwizixa ezifanelekileyo (jonga ungeniso kunye nokunyamezelana).
IsistimAkukho zifundo zinentsingiselo, kodwa kwagqitywa kwelokuba i-5 - 10mg ngemini ilungele uninzi lwabantu.
Indawo yokunyibilika: 164-166 C
I-Modafinil inokunyusa ukonwaba okuphakathi kwabantu abaqhelekileyo. Ukubeka esweni i-EEG ukusukela kwiyure yokuqala ukuya kwiyure ye-22nd emva kwe-modafinil yomlomo kubonisa ukuba ixabiso le-α / θ elibonisa ukuphakama liphezulu, kwaye amaza okulala amancinci alala phantse acinezelwe ngokupheleleyo. Kubantu abangakwaziyo ukulala, ukungalali ngokwaneleyo kunokubangela ukuba abantu baphaphame kwaye babe nakho ukusebenza.
Zonke iiRacetams zinokuwela isithintelo segazi-lobuchopho (ukuya kumaqondo ahlukeneyo); I-Pramiracetam ine-solubility enkulu enamafutha kwiRacetame eyaziwayo, kwaye ifunxwa ngokukhawuleza ngumzimba- mhlawumbi ngenxa yokukwazi kwayo ukugqitha kwimaleko ephindwe kabini.
Abanye abaphandi bacinga ukuba iyi-5-10x yomelele njengesixhobo sayo esaziwayo ” IPiracetam ".
• Awuyi kuba yingqondo ephezulu ngobusuku obunye, njengakwimuvi ethi "Limitless". Yicinge njengoncediso onokulusebenzisa kwinzuzo yakho.
Ukuthetha ngokuthethileyo: hayi. Ngezikhuthazi ezifana necaffeine, sulbutiamine, kunye ne-modafinil, lelinye ibali.
Izikhuthazi / abenzi bokuphaphama (icaffeine, imodafinil, njl.) - ngaphakathi kwemizuzu engama-30 ukuya kwiiyure ezininzi.
Isondlo esisekwe kwiNootropics (i-Creatine, i-Omega-3) -Ngokuqhelekileyo kwiiveki ezi-4 ukuya kwezi-8.
IPiracetam - Kwiiveki ezi-2 ukuya kwezi-4. Uvavanyo lokuqhutywa kufuneka lwenziwe ubuncinci iiveki ezimbini.
I-8 Ininzi Ubukhulu Bamachiza Wezobisi Zobunzima Kwili hlabathi	I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike ye-Armodafinil